TALO IYO TILMAAN KU WAJAHAN XISBIYADA SIYAASADA IYO MADAXWEYNAHA LA DOORTEY EE SOMALILAND | hogaanka.org
Waayaha iyo wakhtigu waa mid ku socda xaawli oo loo bahan yahay in aynu ilbidhiq
si kasta ka faa’iideysano goorsheegta,horumarku ma aha mid ku yimaada riyo iyo si iska nasiib ah waa se mid ka dhasha shaqo adag,Samir,Allah(swt) oo talada la saarto,iyo qalbi soo jeeda oo ay ku sifoobaan adoomaha Allah.
Sidaa aan u arko dhamaanteen waxa waajib inagu ah in aynu dhisno,horumarino,difaacno dalkeena . Waxaa aan u arkaa in aynu is waanino isna tusaaleyno sidii aynu meel qudha uga soo wada jeesan lahayn horumarka dadkeena iyo dalkeena.
Waxaa laga weriyay Abuu-Ruqayya Tamiim ibn Aws ad-Daarii (Alla ha ka raalli noqdee), in Nebigu yidhi ﷺ: “Diintu waa waano.” Waxaannu nidhi, “Yuu u yahay?” Wuxuu yiri, “Wuxuu u yahay Alla iyo Kitaabkiisa, iyo Rasuulkiisa, iyo madaxda muslimiinta iyo dadweynahaba.” Waxaa weriyay Muslim.
Xadiiskani wuxuu ka hadlayaa qiimaha weyn ee waanadu ku leedahay Diinta Islaamka, Diintu waxay waano u tahay Ilaahay waxaa looga jeedaa: in la aqbalo waanadiisa uu dadka ugu yeeray, in la rumeeyo keli ahaantiisa, in lagu sheego wuxuu isagu isku tilmaamay, lagalana haro shirkiga ama wadaajinta cibaadada, xaqa Ilaahayna aan cid kale la siinnin, nicmaduu kuugu deeqay aan cid kale loo tiirin.
Wuxuu diinku waana u yahay Kitaabka Ilaahay: in la rumeeyo inuu yahay kitaab ka soo degay xagga Ilaahay, kaddibna la xurmeeyo laguna camal falo.
Wuxuu diinku waano ugu yahay Nebiga ﷺ in la rumeeyo inuu yahay Rasuulkii Ilaahay u soo diray dadka lana rumeeyo wuxuu sheego oo dhan, lana raaco awaamiirta uu faro, lagana dheeraado wuxuu reebo.
Dadweynaha wuxuu waano ugu yahay in lagu hunuuniyo xaqa, in wax la baro, kuwa qalloocan in looga digo xumaanta, kuwa jaahilka ah wax la baro iyo wixi la mid ah. Marka diinkuba wuxuu ku hirgeli karo waa waano iyo wax isu sheeg. Sidaas darteed waa waajib igu ah inaan waaniyo madaxda dalkyga talona siiyo siday ila tahay taladayduna waa mid wax dhiseysa uun. Waxaa laga weriyey Abuu Hureyra (Allaha ka raalli noqdee), in uu Nebiga ﷺ yiri:
Waxaa soo weriyey xadiiskaa Muslim.
waxaahadaba iga talo iyo tilmaan ah:.
1- Xisbiyada Siyaasada Somaliland
Xisbiyada Siyaasadu waa meesha ama isha ay ka soo baxaan hogaamiyayaasha siyaasadeed ee qarankasta,waa jidka carbinta,kala hufka iyo kala haadinta xubnaha xisbiyada,waana goobaha ugu horeeya ee ay tahay inay diyaariyaan madaxda berito ee dal sidaa darteed waxaa ugu horeyba talo ugu soo jeedinayaa:-
a) b) Sinaan. c) Karti. d) Wadaniyad. d) Aqoon. e) Shaqo adag oo togan.h) Barbaarin iyo soo saarid hogaamiyayaal dhan ah oo xul ah kuna hubeysan sharafr,hogaamin aqoon daacadnimo,hal abuurnimo iyo naf hurid.Arimahaasi iyo kuwo xidhiidh laleh ayaa saldhig u ah guuleysiga xisbi amaq axsaab rabta ku guuleysiga xukunka iyo u shaqeynta dalka iyo dalka.Sidaas awgeed xisbiyada siyaasadeed waxa aan talo ku siin lahaa in ay muhiimada siyaan qodobada kor ku xusay oo ah qaar wax lagu dhisayo,balse aan ahayn kuwo wax loogu dhimayo qranimada. Waxaa looga bahan yahay in ay u diyaar garobaan jidka dheer ee doorashadooyinka soo socda hadii Alleh awooda iska lehi ogolaado.Waxaa kow ka ah diyaar garow gooda in ay dib u saxid ku sameeyaan khaladadkii laga yaabo in ay dheceen mudadii doorasha dalku ka socotey.
Khaladaadka la galey waxaa ugu waaweyn waa adeegsiga social media ha oo warar aan habooneyn laga sii daayey dadna neftooda ku waayeen tani waa mid u baahan in lagu xaliyo sidii ugu haboon ee sharciga waafaqsan.Xisbiyadu waa iney masuul ka noqdaan wixii afkooda ka soo baxa in ay iyagu masuul ka yihiin ficil kasta oo aan faa!iido ugu jirin umada Somaliland iyo qarankeena talaabo na laga qaado dadkii kiciyey dadka ku dhintay rabshadahaasi abaabulnaa.Xisbi iyo qabyaaladi waa kuwo aan wada shaqayn Karin,Sidaa awgeed waxaa iga talo ah in xisbiyadu kor u qaadaan dhisida maskaxda xubnahooda iyo madaxdooda si doorashooyinka dambe loogu ololeeyo xisbinimo,reerahana reernimaduna doorkeeda qarabanimo iyo is aqoonsiga loo dhaafo.
2-Madaxweynaha Cusub (Mudane Muuse Biixi)
Mudane Madaxweyne waxaa aan filayaa in aad waayo aragnimo balaadhan iyo xogogaalnimo weyn u lee dahay siyaasada,dhaqaalaha iyo arimaha bulshada waayo mudo dheer ayaad ku soo jirtey siyaasada Somaliland maalmo adag iyo maalmo dabacsanba waxaad ka mid ahayd dadka tirada yar ee ka nool dadkii noftooda u huray dalkan,ilaa imikana sii wada hawlaha lagu dhisayo wadankeena. Kolkaas ku soo dhawoow hawlsha adag ee qabyada badan sida dhismaha qaran aan la aqoonsan,bulsho dhaqaale xumo hayso,abaaro,shaqo la’aan,tabashooyin siyaasadeed , sicir barar,iwm. waxaana kugula talinayaa :
a) Cadaaladu waa dhismaha saldhiga u ah horumarinta dal doonaya horumar dhan walba ah ee hadaf ka dhigo.
b) Aqoontu waa Iftiinka kala garashada Xaqa iyo baadilka ee toosh ka dhigo
c) Talo inagaa ku nool ee gunti ka dhigo oo dhageyso dadkaga talooyinkooda iyo cabashooyinkoodaba.
d) Sinaantu waa hubka hogaamiyaha ee gaadh ka dhigo.
e) Hadal waa Run kama Reys ee midigta sudho.
f) Faro Dufan la heyni wax ma duugaane dadka iyo duunyadaba u horsed barwaaqo iyo nolol gobanimo leh oo la dagaalam fakhriga, abuurna Ilo dhaqaale oo
g) Far qudhi fool ma dhaqdee xulo ragii gacan kaa siin lahaa horumarinta Somaliland,kuna dooro daacadnimo,wadaniyad,aqoon iyo hufnaan karti iyo geesinimo,diin iyo Alle ka cabsi.
Ugu dambeyntii waxaan kuu rajeynayaa shaqo hufan Alleh na waxaanu kaga baryayaa inuu kugu asturo xilkaa culus ee lagugu gardaadiyey.
Xadiisyadan waxaan ka soo xigtay. http://maktabadda.com/afartanka-xadiis/afartanka-xadiis/
← MAHADSANID MUDANE MADAXWEYNE (AXMED MAXAMED SIILAAYO)
MADAXWEYNE TRUMP WUXUU DIB UGU NOQDAY WAKHTIGII BURBURKA IYO ISKU DIRKA FALAYSTIIN IYO ISRAA’IIL →